ဒေါင်လိုက်စက်ယန္တရား ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး ဒေါင်လိုက်စက်ယန္တရား မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. ထူးချွန်ထက်မြက်ဒီဇိုင်နာများ, အင်ဂျင်နီယာ, ပို့ကုန်စီးပွားရေးသမား, ဈေးကွက်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအင်အား numbers မ​​ျားရှိသည်။ သုတေသနနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲခြင်း, နိုင်ငံခြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာနှင့်လက်မှုပညာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး, အရည်အသွေးပေါ်အလေးအနက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတဆင့် ဒေါင်လိုက်စက်ယန္တရား အထူးအနုပညာနှင့်လက်မှုပညာဖြစ်လာခဲ့သည်။
ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူတကွရှေ့ဆက်သွားပါ။ အနာဂတ်၌ကျွန်ုပ်တို့၏ပြီးပြည့်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် resplendent အောင်မြင်မှုမျှော်လင့်။
ပုံစံ - VB-1400
X/Y/Z Axis ခရီးသွား:၁၄၀၀x၇၆၀x၇၀၀ မီလီမီတာ
Spindle Taper သည်:BT-50
Spindle မြန်နှုန်း:၈၀၀၀ rpm(ခါးပတ် Drive)
Spindle မော်တာ:၁၅/18.5 kw
Armless အမျိုးအစား ATC
ခါးပတ်အမျိုးအစား spindle 8000rpm
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/vertical-machining.html
အကောင်းဆုံး ဒေါင်လိုက်စက်ယန္တရား ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် ဒေါင်လိုက်စက်ယန္တရား မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ
CNC ဒေါင်လိုက်စက်ထူးခြားချက်: ဖွဲ့စည်းပုံကို CATIA CAM နှင့် FEA တို့ကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်(Finite Element Analysis). လုပ်ငန်းစဉ်သည်မြင့်မားသောဂျီ ometric မေတြီပုံတိကျမှုနှင့်မျက်နှာပြင်ဖြတ်တောက်မှုကိုသေချာစေသည်. ခိုင်မာတောင့်တင်းမှုကိုတိုးချဲ့ရန်ခိုင်မာသောဖွဲ့စည်းပုံ,စက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စက်သက်တမ်းကြာရှည်သည်. သတ်မှတ်ချက်: စားပွဲအရွယ်အစား(LxW):၈၆၀x၄၅၀ မီလီမီတာ တီ-slot နှစ်ခု(CDxWxNo):100x18mmx3T မက်စ်.စားပွဲတင်ဝန်:500 ကီလိုဂရမ် X/Y/Z ဝင်ရိုးခရီးသွား:800/450/၄၈၀ မီလီမီတာ Spindle နှာခေါင်းကိုစားပွဲမျက်နှာပြင်သို့:၁၀၀-၅၈၀ မီလီမီတာ X/Y/Z Ball ဝက်အူများ: Ø32x12 မီလီမီတာ ဗိုင်းလိပ်တံ taper:BT-40 ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း-ကူးစက်ခြင်း:၈,rpm ၀၀၀ လျင်မြန်သောနှုန်းထားများ(X/Y/Z):၂၄/24/၂၄ မီတာ/မိ ဓာတ်ပြား-အမျိုးအစား&tool သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်:လက်နက်မဲ့/16T လမ်းညွှန်ချက်များ:တစ်ပြေးညီ ဗိုင်းလိပ်တံမော်တာ:၇.5/၁၁ kw Servo မော်တာ(X/Y/Z):၁.6/3/4 kw X/Y/Z ဝင်ရိုး:၃၀/30/၃၀ မီလီမီတာ ဝင်ရိုးနှုန်းရထားလမ်းပိတ်ပင်တားဆီးမှု:၄ ပီစီ စက်အလေးချိန်:ကီလို ၄၀၀၀ Standard Accessories များ: Tool box ပွတ်လျှောမီးရထားကိုယ်ရံတော် ဗိုင်းလိပ်တံမှုတ်ကိရိယာ သတိပေးချက်အလင်း 8,000rpm ခါးပတ် drive ကိုဗိုင်းလိပ်တံ အလိုအလျောက်ချောဆီစနစ် အလုပ်လုပ်မီးအိမ် ဗိုင်းလိပ်တံရေနံအအေး device ကို Foundation pads များနှင့် bolts များကိုချိန်ညှိသည် မျက်နှာပြင်အဖုံးသတ္တုအပြည့် အအေးစနစ် လက်မောင်းမဲ့ ATC ဝက်အူ-type chip conveyor အမျိုးအစားဖြစ်သည် ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်3လခန့်အာမခံချက်:ယန္တရားအတွက် ၁ နှစ်အာမခံ,ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အာမခံချန်လှပ်ထားသည်.ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်
CNC ဒေါင်လိုက်စက်မျိုးဆက်သစ် VMC သည်တိကျမှန်ကန်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိစေသည်,အလူမီနီယံကဲ့သို့ပစ္စည်းများ ၀ ယ်သူအများစုနှင့်တွေ့ဆုံရန်ထူးခြားသောဖြတ်တောက်နိုင်မှု,သံ,cooper နှင့်ခိုင်မာသောပစ္စည်း. ထူးခြားချက်: စက်အမြင့်တပ်ဆင်ထားသည်-စွမ်းရည် linear သံလမ်း. မြင့်မားသောတောင့်တင်းသောပုံသွင်းတည်ဆောက်ပုံသည်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်စက်သက်တမ်းကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်. X/Y/Z axis သည် pre ကိုလက်ခံသည်-ကြီးမားစွာချုံ့ထားသည်-အချင်းဝက်အူ. ၎င်းတွင်မြန်ဆန်တည်ငြိမ်သောအလိုအလျောက် tool ပြောင်းလဲမှုယန္တရားရှိပြီးမြင့်မားသည်-ထိရောက်မှု spindle. သတ်မှတ်ချက်: စားပွဲအရွယ်အစား(LxW):၁၁၀၀x၅၁၀ မီလီမီတာ တီ-slot နှစ်ခု(CDxWxNo):100x18mmx5T မက်စ်.စားပွဲတင်ဝန်:ကီလို ၈၀၀ X/Y/Z ဝင်ရိုးခရီးသွား:1000/510/၆၁၀ မီလီမီတာ Spindle နှာခေါင်းကိုစားပွဲမျက်နှာပြင်သို့:၇၅-၆၈၅ မီလီမီတာ X/Y/Z Ball ဝက်အူများ: Ø၄၀x၁၂ မီလီမီတာ ဗိုင်းလိပ်တံ taper:BT-40 ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း-ကူးစက်ခြင်း:၈,rpm ၀၀၀ လျင်မြန်သောနှုန်းထားများ(X/Y/Z):၂၄/24/၂၄ မီတာ/မိ ဓာတ်ပြား-အမျိုးအစား&tool သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်:လက်နက်မဲ့/16T လမ်းညွှန်ချက်များ:တစ်ပြေးညီ ဗိုင်းလိပ်တံမော်တာ:၁၅/18.5 kw Servo မော်တာ(X/Y/Z):၃/3/4 kw X/Y/Z ဝင်ရိုး:၃၅/35/၃၅ မီလီမီတာ ဝင်ရိုးနှုန်းရထားလမ်းပိတ်ပင်တားဆီးမှု:၄ ပီစီ စက်အလေးချိန်:ကီလို ၅၃၀၀ Standard Accessories များ: Tool box ပွတ်လျှောမီးရထားကိုယ်ရံတော် ဗိုင်းလိပ်တံမှုတ်ကိရိယာ သတိပေးချက်အလင်း 8,000rpm ခါးပတ် drive ကိုဗိုင်းလိပ်တံ အလိုအလျောက်ချောဆီစနစ် အလုပ်လုပ်မီးအိမ် ဗိုင်းလိပ်တံရေနံအအေး device ကို Foundation pads များနှင့် bolts များကိုချိန်ညှိသည် မျက်နှာပြင်အဖုံးသတ္တုအပြည့် အအေးစနစ် လက်မောင်းမဲ့ ATC ဝက်အူ-type chip conveyor အမျိုးအစားဖြစ်သည် ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်3လခန့်အာမခံချက်:ယန္တရားအတွက် ၁ နှစ်အာမခံ,ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အာမခံချန်လှပ်ထားသည်.ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်
CNC ဒေါင်လိုက်စက်ထူးခြားချက်: Y ကို ၀ င်ရိုးတွင်ဆလိုက်သံလမ်းလေးခုတပ်ဆင်ထားသည်. သုံးယောက်-ဝင်ရိုးလျှောသံလမ်းအားလုံးကို Turcite နှင့်ကပ်ထားသည်-B ဝတ်ပြားများ. မြင့်မြင့်လက်ခံပါ-အရည်အသွေးဝက်ဝံများနှင့်ဘောလုံးဝက်အူများ,pre နှင့်လိုက်ဖက်သည်-ချုံ့ခြင်းနှင့်ကြိုတင်-တင်းမာမှု,မြင့်မားသောတိကျသေချာစေရန် optimized axial နှင့် radial force configuration ကိုပံ့ပိုးပေးရန်. သတ်မှတ်ချက်: စားပွဲအရွယ်အစား(LxW):၁၂၀၀x၅၁၀ မီလီမီတာ တီ-slot နှစ်ခု(CDxWxNo):100x18mmx5T မက်စ်.စားပွဲတင်ဝန်:ကီလို ၈၀၀ X/Y/Z Axis ခရီးသွား:၁၀၀x၆၁၀x၆၁၀ မီလီမီတာ Spindle Taper သည်:BT-40 Spindle မြန်နှုန်း:၈၀၀၀ rpm(ခါးပတ် Drive) Spindle မော်တာ:၁၅/18.5 kw ဓာတ်ပြား-အမျိုးအစား&ကိရိယာသိုလှောင်နိုင်စွမ်း:လက်နက်မဲ့/16T လမ်းညွှန်ချက်များ:Hard Rail စက်အလေးချိန်:ကီလို ၇၁၀၀ Standard Accessories များ: ပွတ်လျှောမီးရထားကိုယ်ရံတော် Foundation pads များနှင့် bolts များကိုချိန်ညှိသည် သတိပေးချက်အလင်း Chip ဝက်အူ ဝက်အူပေါ်ကို အလုပ်လုပ်မီးအိမ် အလိုအလျောက်ချောဆီစနစ် မျက်နှာပြင်အဖုံးသတ္တုအပြည့် အအေးစနစ် ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်3လခန့်အာမခံချက်:ယန္တရားအတွက် ၁ နှစ်အာမခံ,ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အာမခံချန်လှပ်ထားသည်.ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်